Usuku lokuqala lweAmazon luba: fumana ikhadi le-sd le-128gb yasimahla kunye nintendo switch lite
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Prime Prime yeAmazon ibile: Fumana ikhadi le-SD ye-128GB yasimahla kunye neNintendo switch Lite
I-Prime Prime yeAmazon ibile: Fumana ikhadi le-SD ye-128GB yasimahla kunye neNintendo switch Lite
Iindibano zeAmazon kunye neApos; iiNkulumbuso yoSuku lweNkulumbuso zisaqhubeka, kwaye zonke iintlobo zeentengiso bezikhula ngasekhohlo nangasekunene kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. Eyona yamva nje yokutsala umdla wethu ibe sisinikezelo esimnandi kwezona klasikhi zemidlalo yokudlala: iNintendo Shintsha (uhlobo lweLite).
Ukuba uthenga iTshintshi eLite kwiAmazon ngoku, uyakufumana ikhadi le-SD elisayinwe yiSanDisk, ngobukhulu be-128GB, simahla. Ngokwesiqhelo, ikhadi longeza i-35 yeedola ngaphezulu kwexabiso eliqhelekileyo, kodwa kangangexesha elithile, kwaye iiapos zibandakanyiwe kwiphakheji yasimahla ngokupheleleyo.
Isivumelwano esifanayo sisebenza kuyo yonke imibala yeNintendo switch Lite-nokuba iblue, tyheli, ikorale, ngwevu, okanye itoyitoyi. Unokufumana kuphela ubungakanani be-128GB simahla, nangona kunjalo; ukuba ufuna nabuphi na obunye ubungakanani, kuya kufuneka uhlawule ixabiso lalo lokuqala ngaphezulu kwexabiso lesiseko sekhonsoli.
Ikhadi le-SD eliza neNintendo yeyona nto ilungileyo onokuyifumana kwikhonsoli. Yenziwe yenye yeempawu eziphambili zekhadi le-SD emhlabeni (iSanDisk), kwaye iza nesantya esivuthayo sokufunda ukuya kuthi ga kwi-100MB ngomzuzwana, kwaye ubhale isantya ukuya kuthi ga kwi-90MB.
Khumbula, iNintendo Shintsha iLite yinguqulelo ethathiweyo yoTshintsho lwantlandlolo: ayitshiphu kakhulu, kodwa iza ngaphandle kolawulo lweJoy-Con kunye nezinye izinto ezahlukeneyo. Ukanti eyona nto kanye yeyokuba kutheni singaze sizibone izaphulelo ezininzi kwi-switch Lite, njengoko sele isisivumelwano esilixabiso eliphantsi kunohlobo oluqhelekileyo.
Kungenxa yeso sizathu ukuba ukuba ucinga & ukufumana iNintendo switch, ngoku kunokuba lelona xesha lilungileyo. Ngokuqinisekileyo uya kuyisebenzisa i-128GB yokugcina, njengoko isixhobo ngokwaso siza ne-32GB encinci, inxenye yayo ethathwe yinkqubo ngokwayo kwaye ayinakusebenziseka. Ukuba unayo nayiphi na into efana nomdlalo ophakathi, ezo ziya kukugcwalisa ngokukhawuleza kwaye ungavuya ukufumana ikhadi le-SD simahla!
isabelo semarike yeapile kuthi
Amaxabiso e-T-Iselfowuni entsha yokujonga isicwangciso sokuSeta usapho kwi-6 / SE
I-Pokemon YOKONGEZA into entsha ekuvumela ukuba udlale nomhlobo wakho we-monster
EyonaGalaxy Note 20 kunye neNqaku lama-20 abakhuseli bekrini
I-Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: zeziphi & iiapos ezahlukileyo kwaye ngaba kufuneka uziphucule?
Ayinguwe, ayibandi, yingqele: I-T-Mobile kunye ne-AT & T ziphantsi eTexas nakwezinye iindawo zelizwe.